Sideen u beddelaa font -kayga Instagram -ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideen ugu beddelaa font-ka Instagram-kayga?
April 26, 2021 0 comments 321
Waxaan nahay aadanaha waan kala soocnaa midba midka kale dhinacyo badan oo aan midkoodna ahayn hal-abuurnimo. In kasta oo inbadan oo inaga mid ah aysan dhib ku qabin cabiraada horay loo aasaasay ee shabakadaha bulshada, kuwa kale waxay jecelyihiin inay ka soo baxaan kooxda iyagoo ku daray faahfaahin ka duwan shabakadahooda bulshada.
Qaar waa sawiro, kuwa kale fiidiyowyada, isticmaalka miirayaasha iyo in yar oo kale xarfaha kala geddisan, kooxdan dadka jecel inay ka soo baxaan kooxda, maanta waxaan bari doonnaa sida loo beddelo xarfaha Instagram. In kasta oo xulashooyinka aysan badnayn, waxaan kuu xaqiijinaynaa inaad isbeddel sameyn doonto.
Sida loo sameeyo:
In kasta oo, arjiga oo kale uusan lahayn ikhtiyaarkan, haddana waxaad haysataa hal ama aalad kale oo kuu oggolaan doonta inaad sidaas samayso, waxaa muhiim ah inaad ogaato in codsiyadaan ay diiradda saarayaan beddelidda xarfaha Instagram. Markaa ha seegin tilmaamaha aan ku siin doonno:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa raadinta codsiyada sida gaarka ah ugu go'an hawshan, waxaa jira dhowr la jaan qaadaya Instagram, gabi ahaanba bilaash ah oo si sahlan loo isticmaali karo.
Waxaan ku talin karnaa:
Fonst qabow oo loogu talagalay Instagram.
Mar kala duwan codsiyada oo dooro midka aad ugu jeceshahay. Waa inaad soo dejisaa oo si habboon ugu rakibtaa kombiyuutarkaaga.
Gali arjiga la soo dejiyey oo berrinka qoraalka ah, ku qor fariinta aad rabto inaad ku darto daabacaadaada si shaqsi ah.
Codsigu wuxuu ku siin doonaa xulashooyin xaraf oo kala duwan oo aad ka dooran karto midka ku habboon dhadhankaaga ama daabacaadda aad samayn doonto.
Faahfaahin muhiim ah Mid ka mid ah aaladahaan ayaa ah inay si tartiib -tartiib ah kuu tusi doonaan dhinaca qoraalka aad rabto inaad daabacdo uu qaadan doono iyadoo la raacayo xarafka aad dooratay.
Xulo midka aad ugu jeceshahay, waxaan kugula talineynaa inaad dooratid qaab xarfo oo si sahlan loo aqrin karo, xarfaha aadka u faahfaahsan badiyaa ma laha natiijo wanaagsan oo kama dambeys ah.
Gal Instagram -kaaga oo ku dheji qaabka font -ka la doortay meesha aad rabto inaad adigu iska habayso.
Haddii waxa aad rabto inaad habaynayso ay tahay magacaaga ama, haddii aad taas ku guuldaraysato, taariikh nololeedkaaga, waa inaad gelisaa dejimaha dalabka, qaybta “tafatirka astaanta guud”, dooro waxaad rabto inaad habayso oo qorto waxaad rabto.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho isla qoraal iyo xaraf isku mid ah sawirrada darbigaaga, markaa samee daabacaad cusub oo ku dheji farriinta qeybta tan.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa noocyo kala duwan waraaqaha si aad uga jawaabto farriimaha iyo faallooyinka kala duwan ee kuwa raacsan, si aad u habeyn karto faallooyinkaaga qaab asal ah.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad u isticmaasho xarfaha kala duwan daabacaadaha kala duwan, waad awoodi doontaa inaad sidaas samayso. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan dhadhankaaga iyo waqtiga aad heli karto.
Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad shaqsiyeysato daabacaadaha kala duwan oo leh qoraalo kala duwan oo lagu qoray xuruuf kala duwan, waa inaad mar kale samaysaa habraaca mid kasta oo ka mid ah qoraallada si gooni ah.
0.1 Sida loo sameeyo:
0.2 Waxaan ku talin karnaa:
Sidee loo beddelaa magaca boggeyga Facebook?
Sidee looga soo degsadaa fiidiyowga twitter-ka?